Home Wararka Saciid Dani oo weji gabax kala kulmay Odayaasha dhaqanka Puntland
[Daawo] Saciid Dani oo weji gabax kala kulmay Odayaasha dhaqanka Puntland
Hoggaamiyaha dhaqanka Puntland oo shir aay isugu yimaadeen uga hadlay hannaan Doorashooyinka Dowladda Federaalka ah iyo Habraacii dhawaan aay soo saareen Dowlad Goboleedyada iyo RW Rooble.
Deni ayaa eedeyn culus kala kulmay qaabkii uu u soo xulay xubnaha Aqalka Sare, waxaana oday ka mid odayaashii meesha ka hadlay uu u sheegay Deni “Madaxweyni kaa yeeli meyno anigaa gacanteyda kusoo xulanaayo Xildhibaanada beelaha Puntland. Kaa yeeli meyno in aad dhinac marto Isimada Puntland” Isagoo hadalkiisa sii wato ayaa yiri “Saciidow ha noqon ninkii ganactiisa ku dumiyay Puntland”
Ganacsatada oo iyagana halkaa ka hadlay ayaa waxaa aay sheegeen sida aay uga xun yihiin dhaqanka siyaasadeed ee Puntland uu ku soo kordhiyay Deni, waxayna cod dheer ugu sheegeen in reer Puntland aanay marti isaga ugu noqon doonin in Saciid Deni uu siduu doono ka yeelo, afduub siyaasadeedna ma aha wax aay aqbali doonaan reer Puntland.
Shirka aya laga soo saaray bayaan iyadoo looga digay Maamulka Puntland in uu ka waantoobo falalka fool xumada leh ee uu doonayo Deni in uu ku boobo kuraasta aqalka Hoose iyagoona dalbaday in Doorashada aay ka dhacdo Magaalada Gaalkacyo.
Halka Hoose ka daawo xafladdii Odayaasha iyo Ganacsatada Puntland